Oduu dinagdee guddaan Sioux City downtown walgahee jira. Capital Ho-Chunk guyyaa har’aa bakkee busin | KWIT
Ho-Chunk gamoowan tursiisudhaf fi gammoowan garii haromsuu fi manneen busnasaafi maneen jiraanyaaf carraa gaari akka argatanif murteesse jira.
Capital Ho-Chunk gosa Winnebago Tribe kan Nebraska keessa kan taaee economy hundaa olaantummaan qabatee jira.
Ijaarsa haarawa mana hidhaa Woodbury County irrati meeshaa isaaf barbaachisu haga qaalahe irraa haga jigu takka turee jira.
Bulchaan mana hidhaa haarawa kan Woodbury County keessati warren ittigaafatmtoota akka himanitti meeshadhan barbaachisu harka 70% dabalanii akka jiran himan.
Wagga tarte March keessati, haala baduu irra kan jiruu fi haala sodaachisa irra kan jiru maneen hidha akka haaromfamuu $mllion 50 akka kenname ture gabaasan. Manni hidhaa haroyni, East Lewis Boulevard 28th aane akka banamuuf karoorfame himan.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasaniiti sababa corona virus namni haarawa 13 akka due fi namni haarawa 500 ol ta’an akka haarawa qabaman gabaasan, nama 22 haarawa Woodbury County keessati qabame dabalate.
Akkasumas Sioux City Community School District akka mullisu namni haarawa mana barumsa keessati qabam barataa 2 fi hojattaa 1 akka tae gabaasan. Barattoota 191 fi barsiisota 4 ttu ammaaf adda baafame taa’u jira.